९१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सेती नदी-६ जलाशययक्त परियोजनाको काम अगाडि बढ्यो
काठमाडौं। करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ लागतको सेती नदी-६ जलाशययुक्त परियोजनाको काम अगाडि बढेको छ। ३०८ मेगावाट क्षमताको परियोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको
९५.५ अङ्कले बढ्यो नेप्से
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ९५.५ अङ्कले बढेको छ । सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से २४ सय नाघेको छ । नेप्से २४२० अङ्कमा पुगेको छ । एउटा कम्पनीको मूल्य स्थिर, एउटाको गिरावट आयो भने १९३ को बढ्यो । २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो । सबै उपसमूह उक्लिएका छन् । […]
Prashasan 24 दिन पहिले
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) सेयर बजारको परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ । परिसूचक १६.०४ अङ्कले बढेर २६५० मा कायम भएको छ । कुल २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भयो । १० कम्पनीको मूल्य स्थिर रहँदा १०६ कम्पनीको बढ्यो भने ७७ को घट्यो । बैङ्किङ ६, विकास बैङ्क ५६, होटल तथा पर्यटन २०, […]
चार गुणाले बढ्यो विदेश जानेको संख्या
काठमाडौं, पुस ८ । कोभिड प्रभावित गत २ वर्षमा रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरे पनि उल्टै बढ्यो । चालु आवको सुरुदेखि भने रेमिट्यान्स आय लगातार घटिरहको छ । तर यही बेला विदेशमा जाने युवाको संख्या करिब चार गुणाले बढेकाले आगामी दिन रेमिट्यान्स आफ्नै लयमा फर्कन संकेत देखिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्षका सुरुका […]
अलैँचीको बजारभाउ बढ्यो
काठमाडौं । अलैँचीको नयाँ उत्पादन बजारमा आएसंगै बजारभाउ पनि बढेको छ । पछिल्लो केही वर्षयता निरन्तर घटिरहेको मूल्य सोचे भन्दाराम्रो आएकोले किसानहरु उत्साहित बनेका छन् । केही हप्ता अघिदेखि स्थानीय बजारमा निस्कन थालेको अलैंचीको मूल्य प्रतिमन रू. ३२ हजारदेखि ३५ हजारसम्ममा खरीदविक्री भैरहेको छ । अलैचीको मुल्य गतबर्ष भन्दा १२ हजारदेखि १४ हजारसम्म बढेको किसानले […]
फुटबलमा क्लबको सहभागिता बढ्यो / सि डिभिजन लिगमा ७८ क्लब सहभागी
फुटबलमा क्लबको सहभागिता बढ्यो । सि डिभिजन लिगमा ७८ क्लब सहभागी रहेका छन।
सर्वसाधारणमा बैंकको पहुँच बढ्यो
काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय सघनता र वित्तीय पहुँचको स्थितिमा सुधार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तारसँगै नेपालमा वित्तीय पहुँच बढेको हो । अध्ययनमा व्यक्तिको एकमात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा पनि २०७७ जेठ मसान्तसम्ममा ६७.३४ प्रतिशत नागरिकसँग कम्तीमा एक निक्षेप खाता रहेको देखिएको छ । २०७६ असार […]
'दुई तीन दिनमै दश रुपैयाँ बढ्यो ?!' कीर्तिपुरको एउटा खाद्य पसलमा एक लिटर खानेतेल किन्न पुगेका सुरेश महर्जनले पसलेलाई सोध्नुभयो । 'बढ्यो नि के गर्नु भोलिदेखि यही पनि पाइँदैन होला' पसलेले जवाफ दिए । 'कोरोना सङ्क्रमणभन्दा पनि महँगीले पो मरिने भयो' बनावटी हाँसो हाँस्दै सुरेश तेलको प्याकेट बोकेर पसलबाट बाहिरिनुभयो । एकैछिनमा त्यही पसलमा एक जना महिला खाना पकाउने ग्यास खोज्दै पुगिन् । 'ग्यास छ ?' उहाँको प्रश्न पसलेले सुने, नसुनेझैँ गरे ।...
काठमाडौं । भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएर पठाएको छ । आइओसीले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको हो । आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु ४।२०, डिजेलमा रु ४।०७ रुपैयाँ, मट्टितेलमा रु ४।६५, हवाई इन्धनमा रु ४।०६ तथा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु ९१।९६ मूल्य बढेर आएको निगमले जनाएको छ […] The post फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सेयर बजारमा उछाल आएको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा लगानीकर्ता आकर्षण देखिँदा नेप्से सूचक र खरिदबिक्री रकमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । आज मात्रै १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार हो । नेप्से सूचक २५६१.४७ विन्दुमा आइपुगेको छ । यो पनि […] The post बैंकहरुको सेयर मुल्य बढ्यो, १० अर्ब ६१ करोड कारोबार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.